Ny Big Switch sy Bluelock | Martech Zone
Ny Big Switch sy Bluelock
Sabotsy, Desambra 22, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanomboka namaky ny The Big Switch by Nicholas Carr. Ity misy sombiny avy amin'ilay tranokala efa maty:
Zato taona lasa izay, nijanona tsy namokatra ny herin'izy ireo tamin'ny motera etona sy dynamo ireo orinasa ary nametaka ilay takelaka herinaratra vao namboarina. Ny hery mora navoakan'ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra dia tsy nanova ny fomba fiasan'ny orinasa fotsiny. Nametraka fanehoan-kevitry ny fanovana ara-toekarena sy ara-tsosialy nahatonga ny tontolo moderina io. Androany, revolisiona toy izany koa no eo am-piandohana. Mifamatotra amin'ny tambajotran'ny informatika manerantany, nanomboka nanaparitaka data sy kaody lozisialy tao amin'ny tranonay sy ny orinasa izahay Amin'ity indray mitoraka ity dia ny computing izay lasa utilita.
Ny fifandimbiasana dia efa mamerina ny indostrian'ny solosaina, mitondra mpifaninana vaovao toa ny Google sy Salesforce.com eo aloha sy mandrahona toa an'i Microsoft sy Dell. Fa ny vokany dia hahatratra lavitra kokoa. Ny computing compteur mora vidy sy entina ampiasaina dia hanova tanteraka ny fiaraha-monina amin'ny farany toa ny herinaratra mora vidy. Efa hitantsika ny vokany teo aloha? amin'ny fanovana ny fifehezana ny haino aman-jery avy amin'ny andrim-panjakana ka hatramin'ny isam-batan'olona, ​​amin'ny adihevitra momba ny lanjan'olo-tsiambaratelo, amin'ny fanondranana ny asan'ny mpiasa fahalalana, na dia eo aza ny fitomboan'ny harenan'ny harena. Rehefa mihitatra ny fitaovan'ny fampahalalam-baovao dia hitatra ihany ny fanovana ary hihombo ny hafainganan'izy ireo.
Ny Big Switch dia efa zava-misy. Tamin'ny volana Janoary, Patronpath dia mamindra ny fotodrafitrasa famokarana ho any Bluelock. Tontolo vaovao (araka ny filazan'ny dokam-barotra eo amin'ny sisiny).
Io no fiderana tonga lafatra ho an'ny Software as a Service (Saas). Ireo orinasa SaaS niasako dia nanamboatra ny mizana hatrany amin'ny fitaovana sy ny ekipan'ny olona hanohana azy ireo. Bluelock no vahaolana mety amintsika satria afaka mampiroborobo ny orinasantsika isika nefa tsy manahy momba ny fotodrafitrasa ataontsika na ireo loharano lehibe miaraka aminy. Fampiasana ivelany ny manahy!
Infrastructure as a Service (IaaS) dia maodelim-pandrosoana mipoitra izay ahafahanao mividy loharanom-baovao IT amin'ny mpamatsy IaaS ho vidiny raikitra isam-bolana. Miaraka amin'i IaaS, raha tokony mividy antontan-serivera sy SAN iray dia afaka manofa efitrano enimpolo enti-miasa, fitehirizana roa terabytes ary fitadidy efatra-enina gigabytes enina enim-polo ary mandoa izany isam-bolana na telo volana. Ity tontolo iainana ity no tena niresaka tamin'i Nicholas tao amin'ny bokiny. Izahay dia mividy bandwidth, habaka kapila ary angovo fanodinana toy ny hoe mividy fitaovana hafa izahay.
Mihazakazaka ny ankamaroan'ny mpivarotra IaaS VMWare na rafitra fiasa mitovy amin'izany fa tsy ahafahan'ny virtualization. Ity fomba fiasa amin'ny rafitra fiasa ity no lakilen'ny fametrahana elakelaka kely eo anelanelan'ny fitaovana sy ny tontolo iainanao ahafahany mivezivezy, mivezivezy, azo averina, sns. Izy io koa no mampiavaka ny mpanolotra IaaS amin'ny mpanome tolotra nentim-paharazana na foibe fampiantranoana.
Izahay dia manao ny The Big Switch amin'ny faran'ny volana Janoary. Makà kopia iray amin'ilay boky ary miantso an'i Bluelock.
PS: TSY lahatsoratra tohana ity… zavatra tiako hozaraina fotsiny satria faly be amin'ilay hetsika!
Tags: tanjonaafohr 1981Kim dotcommegauploadsnapsterpiratyPiratebay piratyhalatra
Aza avela hiala amin'ny famonoana olona i Cigna
Mandefasa hafatra fialantsasatra ho an'ny miaramila!
Dec 23, 2007 amin'ny 12: 14 AM
Saingy toa mpanohana tranokala i BlueLock…
Na izany na tsy izany, maninona no manonona ny BlueLock fa tsy manonona ny EC2 an'ny Amazon, S3, ary ny SimpleDB?
Dec 23, 2007 amin'ny 11: 31 AM
Bluelock dia tsy mandoa ny vidiny na ny toeran'ny mpanohana. Omeko fanomezana sy fanomezana maimaimpoana ny sasany amin'ireo namako sy mpiara-miasa amiko indraindray. Angamba tokony hataoko hoe "Namana sy Mpanohana" izany.
Bluelock koa dia eto Indiana - ho hitanao fa manandrana manampy amin'ny fanombohana sy orinasa teknolojia any Indiana aho.
Ny serivisy Amazon dia tsy Infrastructure ho serivisy, Serivisy amin'ny Internet izy ireo. Ny maha samy hafa azy dia ny toetrako izay tsy misintona avy amin'ny 'rahona' (fehezin'i Amazon) izay zaraiko amin'ny olona an-jatony na an'arivony ny tontolo iainako.
Miaraka amin'ny Bluelock dia hanana mpizara natokana, habaka kapila, processeur ary bandwidth. Ao anaty tontolo virtoaly isika - mba hahafahantsika mamerina ny tontolo iainantsika rehefa ilaina izany.
Izahay dia nanome antoka ny SLA, ny fanajana ny indostrian'ny fiarovana ny indostria, ny firewall, ny fidirana an-tsokosoko, ny fidirana amin'ny console, ny fanaraha-maso sy ny fanohanana 24/7, ny backup misy valizy, ny hery miverimberina… omenao anarana izany.
Manantena fa afaka manampy! jereo Bluelock ho an'ny fampahalalana fanampiny.
Dec 23, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Aorian'ny famerenanao mamirapiratra dia angamba tokony ho lasa mpanohana mandoa vola i BlueLock… 😉
@Douglas: Manampy an'i Indiana
Azoko tsara, manao toy izany koa aho any Atlanta, GA (jereo http://web.meetup.com/32/)
@Douglas: Amazon tsy serivisy fananganana fotodrafitrasa
Na tsy mitovy amin'ny BlueLock aza, fa EC2 tsy fotodrafitrasa?
Dec 23, 2007 amin'ny 11: 20 AM
@Mike Misy mifanindry eo anelanelan'ny fanomezana an'ny Amazon EC2 / S3 / SimpleDB sy BlueLock. Saingy amin'ny ankapobeny, samy hafa ireo vahaolana ireo ary mikendry mpihaino samihafa.
Tsy azonao atao ny manangana cluster Amazon raha tsy misy fahalalana ara-teknika mendrika, ary mila manamboatra zavatra hitantanana ireo tranga EC2 samihafa. Misedra olana maromaro ihany koa ianao izay mila karakaraina amin'ny fampiharana, toy ny tsy fisian'ny IP static ny tranga EC2, tsy misy fitehirizana eo an-toerana amin'ny ohatra EC2, fa ny fitehirizana S3 dia miadana kokoa noho ny SAN na kapila eo an-toerana, ary tsy manaiky ny fangatahana SQL ny SimpleDB na mamela ny fidirana sarotra. EC2 sy SimpleDB dia mbola ao anaty beta amin'izao fotoana izao (miaraka amin'ny farany amin'ny beta tsy miankina), ka tsy misy SLA - tsy zavatra tena tianao hampidirina amin'ny orinasanao mitsikera famokarana.
BlueLock amin'ny ankapobeny dia manome anao solon'ny drop-in ho an'ny fonosana Windows sy / na mpizara Linux tsy misy aretin'andoha amin'ny fitantanana azy ireo, na hamerenanao indray ny rindranasao mba hampiantrano azy any Amazon. Afaka miresaka amin'ireo injeniera mpanohana amin'ny telefaona koa ianao.
Izany dia nilaza fa Amazon dia lafo lavitra kokoa hanombohana azy, ary ny BlueLock dia mety tsy hahomby raha tsy mpizara roa fotsiny no ampiasanao. Izy io koa dia andoavam-bola, fa ny vidin'ny BlueLock dia mitovy amin'ny foibe data mahazatra izay mametraka drafitra handoavana vola cpu / disk / bandwidth / sns na mampiasa azy rehetra isam-bolana ianao na tsia.
Fialana andraikitra: mahafantatra olona vitsivitsy miasa ao amin'ny BlueLock aho. Saingy mampiasa am-pahavitrihana ny Amazon S3 amin'ny famokarana aho, mpankafy be ny EC2 (amin'ny tranga mety), ary miandry fatratra ny fanasana beta manokana an'ny SimpleDB.
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra Ade. Hanontany an'i Douglas aho hanoratra lahatsoratra mampitaha sy mampifanohitra ny BlueLock amin'ny serivisy web an'ny Amazon fa tsy ilaina intsony izao sahala amin'ny efa nataonao!
PS Ianareo Karana dia tena miara-mifikitra, doncha? 🙂
Ha! Eny tokoa, Mike!
Iray amin'ireo faritra ireo izay kely kely ka vitsy ny diplaoma fisarahana eo amin'ny orinasa 2 na olona. Miezaka mafy izahay hanamafisana ireo fifandraisana ireo ary handamina faritra ihany koa.
Io no faritra tonga lafatra hananganana orinasa teknolojia satria tsara tokoa ny vidim-piainana sy ny tombony amin'ny hetra. Raha ampitahaina amin'ny firenena dia ambany ny vidiny 20% amin'ny salan'isa. Izay ilay teny ilaintsika hivoahana! Ny fiheverana ny MidWest manoloana ny asa mafy sy ny serivisy lehibe dia misy fiovana lehibe ihany koa.
Indiana kely kokoa dia tambajotra sosialy vaovao izay natomboka handamina tsara ireo orinasa any amin'ny faritra.
PS: Faly aho fa niditra an-tsehatra i Ade. Nifindra tany Bluelock izahay ka tsy mila hahalala ny fahasamihafana rehetra 😉
@Douglass: Io no faritra lavorary hananganana orinasa teknolojia satria tsara tokoa ny vidim-piainana sy ny tombony amin'ny hetra. Raha ampitahaina amin'ny firenena, 20% ve ny vidiny ambany raha oharina amin'ny salanisa. Izay ilay teny ilaintsika hivoahana! Ny fiheverana ny MidWest manoloana ny asa mafy sy ny serivisy lehibe dia misy fiovana lehibe ihany koa.
Saingy tokony hiaina ao ianao Indiana godforbid .... (miala tsiny, tsy nahatohitra '-)
Na izany na tsy izany, toa tsy tokony hiantso ny Chamber of Commerce ianao ho mpanohana anao… 🙂
Dec 23, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Misaotra ny computing ho toy ny fijoroana ilaina. Misy dikany betsaka ary avy hatrany dia mametraka ny IaaS ho amin'ny fomba fijery. Ankasitrahako ilay lahatsoratra na dia eo aza ny fitsaboana manokana an'i Bluelock :).
Lahatsoratra tsara Doug.